lolo Artificial, njengomuntu gazinga encane nokuba umbala multi-anemibala, wabiza esele. Izingwegwe ukuyenga kwezinto le evamile ise umsila kanye nenhloko, phezulu kanye phansi - izihibe ezimbili, eliklanyelwe ukuba aqinisekise line ukudoba, kanye nezinye, ngokulandelana, ngoba indawo tee yesibili.
Okuphoqelekile ingxenye esele - isimame, elisesifundeni umsila, ngawo ukunikeza ezihlukahlukene umdlalo wakhe. usayizi lolo zokhahlamba kusuka ngamasentimitha amabili kuya eziyisishiyagalolunye.
Bambalwa abadobi bazi, ekubambeni phezu rocker eRussia livela emazweni aseScandinavia. Namuhla, yena unqobile ithandwa enkulu phakathi kwalabo ziyazithanda ebusika ngokudoba inhlanzi okuzingela.
Isimiso lapho ukudoba Kwenziwa ugongolo ibhalansi, angadluliselwa nje amazwi ambalwa mayelana maphakathi gravity lokhu lolo line ukudoba kuyanda. Lapho ephakamisa induku phezulu ngenxa yokuqala design lolo yayo iqala ukuya kwesokudla futhi kwesobunxele. Lesi ngiso sizatfu sekufa igama lakhe, futhi enhle lapho ebelidoba umhlaseli.
Ukudoba balancer akuyona inkinga njalo besklevya panacea, kodwa izinzuzo 'wokuvilapha "phezu izinhlanzi bengena ezingosini zayo sobala. Izinhlanzi obuswa ezinkudlwana.
Nge okuhlabayo eyingqabavu, ezifana ekubambeni sokudoba rocker has nezihibe - ijubane kancane ngesikhathi bedoba, okuyinto ngenxa ezinye ngokuphazamisa lapho asuswe tee efuna ukubamba ezinye izisulu, ngakho-ke kuvame sithathelwe indawo Anglers lolo bengena ezingosini zayo, ukuze ngingasebenzisi ukulahlekelwa yisikhathi esibalulekile, bavele.
Kulesi sihloko ungathola Impendulo yombuzo kanjani ukubamba phezu balancer.
Lolu hlobo lokudoba Kuthi ehlukile kunaleyo ngokudoba nge ukuyengwa. Bait ichopho kufanele kube ngaphezulu ngobumnene, ukugcina kwabangela ukushuba komoya kule line ukudoba, amplitude kufanele kube hhayi ningi than ngamasentimitha amabili. Isikhathi misa isikhashana kungenzeka kancane obonakalayo ukudonsa induku kuze kube sekugcineni, njengoba kuvusa ukubamba izinhlanzi ezidla inyama.
Rocker olubi phansi, bese kancane liphuma ambalwa ngamasentimitha. Khona-ke kancane ukubuyela emuva phansi induku. Kulokhu, lo balancer iqala ukuhamba ngapha nangapha, echaza ayisishiyagalombili emva sohlangothi. izikhathi eziyishumi ukudlala ezansi, bese ungakwazi unciphise emgqeni isigamu imitha, bese kancane, ekubambeni kancane kancane ziyasondela kwamanzi.
Khona-ke kancane kancane kudingeka ube mude emgqeni, ukubuyela emuva phansi balancer. Nakanjani ukuthi ngemva kokulunywa kudingeka uqhubeke uyifundisa ukubamba ngesikhathi ukujula efanayo, uqhubeke "imidlalo" ukukhulisa inhlanzi enhla.
I balancer lingasetshenziswa zonke izingqimba amanzi kunoma iyiphi Yiqiniso, ukujula yangempela. Nokho, kumelwe uqaphele ukuthi ezansi amatshe okumsulwa futhi isihlabathi futhi engajulile ukuphindaphinda dive iziteleka zezimayini okuzingela kungaholela nesibaya noma hook ngobugebengu.
Ukudoba ebusika phezu balancer kuhilela nenduku yokudoba kanye esondweni. Lo mugqa akufanele abe ububanzi 0,27 amamilimitha angu, ubude bawo kumele kube ngu-25 metres - umugqa ukudoba mncane akusho okwesabisa izinhlanzi in the game.
Izinzuzo sokudoba balancer okulandelayo:
uma izinhlanzi isethelwe kwasemini, bese kuba a imivimbo embalwa bese uqala ukudoba kakhulu;
Uma bite kuyinto evilaphayo kakhulu, umdlalo ngeke bakugcone inhlanzi, uvuselela nokudla lolo;
slippage okuncane ngesikhathi ukujula oyifunayo;
a rocker ezinkulu - lolo elikhulu.
Kunezinhlobo eziningi Bobs, ezingafani umbala, isayizi, simo kanye impahla kusukela lapho okuphekwe.
Phakathi abadobi kukhona bezibona ukuthi sekulinganisa ungakwazi ukubamba iyiphi inhlanzi okuzingela, okuyinto etholakala amanzi ahlanzekile, kodwa namanje okuhlosiwe esiyinhloko ukudoba kukhona Pike futhi iphezulu. Futhi iqiniso ezithakazelisayo ukuthi rocker wabanjwa enkulu Ngokwesibonelo yalezi izinhlanzi.
Futhi ekugcineni ngifuna ukusho ukuthi uma Umdobi ngenela abakulungiselweyo ngokucophelela, ngeke baphelelwe catch.